एक्सेल वैंकको शाखा विस्तार आक्रमक, तिन दिनमा चार शाखाको उद्घाटन्::Hamrodamak.com
सिइओ भन्छन् ः “प्रदेश १ कै उकृष्ट बैंक बन्छौ”
विर्तामोड । झापाको विर्तामोडमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले शाखा विस्तारलाई तिव्रता दिएको छ । बैंकले पछिल्लो तीन दिनमा चार शाखाको विस्तार गरेको छ । पछिल्लो समय बैंकको शाखा विस्तार आक्रमक देखिएको छ । बैंकले चारै ओटाको शाखा विस्तार झापामा गरेको हो । झापाको बनियानी, सोमबारे, खुदुनावारी र गरामनी गरी चार शाखाको उद्घाटन गरीएको हो ।
झापाको कचनकवल गॉउपालिका बडा नंं ६ स्थित बनियानी बजारमा गत सोमबार (चैत ४) बनियानी शाखाको उद्घाटन गरिएको हो । बनियानी शाखाको उद्घाटन कचनकवल गॉउपालिकाका प्रमुख अन्जार आलम र एक्सेल डेभलपमेन्ट वैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष हेमराज ढकालले संयुक्त रुपमा गर्नुभयो । बनियानी शाखाका प्रबन्ध राजन ढकाल रहनु भएको छ ।
त्यसैगरी सोमवारे शाखाको पनि सोमबार (चैत ४) नै उद्घाटन गरिएको हो । बनियानी शाखाको उद्घाटन पश्चात भद्रपुर भद्रपुर नगरपालिका वडा नंं २ स्थित सोमवारे चोकमा रहेको सोमबारे शाखाको उद्घाटन गरीएको हो । शाखाको उद्घाटन प्रदेश नंं १ का प्रदेश सभासद बसन्त कुमार बानिया, भद्रपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ र वैंकका अध्यक्ष ढकालले संयुक्त रुपमा गर्नु भएको हो । सोमबारे शाखाको प्रबन्ध राज शंखर झा रहनु भएको छ ।
चैत्र मसान्त भित्र ३० बाट ३६ ओटा शाखा पुर्याउने लक्ष्य राखेको यस बैकले मंगलबार (चैत ५) पनि आफ्नो नया शाखाको विस्तार गरेको छ । बैंकले थप नया शाखाको रुपमा मंगलबार अर्जुनधारा नगरपालिका ३ मा रहेको खुदुनावारी शाखाको उद्घाटन गरेको हो । शाखाको उद्घाटन नगर प्रमुख हरि कुमार राना र एक्सेल डेभलपमेन्ट वैंकका संचालक समितिका सदस्य श्री गणेश प्रसाद खनालले संयुक्त रुपमा गर्नु भएको हो । खुदुनावारी खाशाको प्रबन्धक सरोज खतिवडा रहनु भएको छ ।
प्रदेश नं. १ कै जेठो विकास बैंकको रुपमा स्थापित यस बैकले बुधबार (चैत ६) पनि आफ्नो नया शाखाको विस्तार गरेको छ । बैकले बुधबार गरामनी शाखाको औपचारीक उद्घाटन गरेको हो । विर्तामोड नगरपालिका ७ स्थित गरामनी शाखाको उद्घाटन बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुव कुमार शिवाकोटी र एक्सेल डेभलपमेन्ट वैंकका संचालक समितिका सदस्य श्री पुरुषोत्तम लम्सालले संयुक्त रुपमा गर्नुभयोे । गरामनी शाखाको प्रबन्धक समिर पोख्रेल रहनु भएको छ ।
चारै ओटा उद्घाटन समारोहमा बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोख्रेल, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम कुमार गिरी, पंकज घिमिरे, शिव कुमार गिरी, महेशमान प्रधान लगायत स्थानिय समाजसेवी, बुद्धिजिवी, ब्यापारी तथा स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुको उल्लेख्य उपस्थीती रहेको थियो । उद्घाटन समारोहको संञ्चालन कम्पनी सचिव श्याम बहादुर बोहोराले गर्नु भएको थियो ।
३६५ दिन नै बैकिङ सेवा उपलब्ध गराई रहेको यस बैंकले हाल झापा, इलाम र मोर¨का विभिन्न ३० स्थानबाट आवाश, सवारीसाधन, व्यक्तिगत, व्यापारिक लगायत कर्जा सुविधा प्रदान गर्नुका साथै ब्द्यद्यक्, ऋ(ब्क्द्यब्, क्ष्एक्, ऋयललभअत क्ष्एक्, इलष्लिभ ऋभिबचष्लन तथा स्मार्ट मोवाईल वैंकिगं ( क्mबचत ःयदष्भि द्यबलपष्लन), भारत र भुटानसमेतमा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा सहितको ख्ष्कब म्भदष्त ऋबचम, रेमिटान्स सेवा लगायतका सम्पुर्ण बैंकि¨ सेवा प्रदान गरिरहेको छ । निकट भविष्यमै पाचथरको फिदिम, सुनसरीको इनरुवा, इटहरी, भुटाहा र भमरीमा पनि आफ्नो शाखा पुर्याउने लक्ष्य सहित अहिले शाखा सजावटको काम तिव्रता साथ भईरहेको बैंकमा सिइओ दिनेश कुमार पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले प्रदेशकै उत्कृष्ट र लोकप्रीय बैंक बन्ने लक्ष्यका साथ आफ्ना गतिविधिहरु अगाडी बढाएको बताउनु भयो ।
बैकले आ.व. २०७४।०७५ मा खुद मुनाफा रु १५ करोड ५६ लाख ३५ हजार गरेको छ । चुक्ता पू‘जी ६९ करोड २६ लाख ७४ हजार रहेको बैंकको कर्जा ५ अर्व ६५ करोड र निक्षेप ६ अर्व २५ करोड रहेको छ । बैकको तेह्रौ साधारण सभा सोमबार (चैत ११) सम्पन्न हुदै छ । वैंकले आ.व.२०७४÷०७५ को मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पू‘जीको १७ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने र उक्त चुक्ता पु‘जीको ५५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ ।